Lalao Olympika (JO 2016) : tsy nandray fiaingana teo amin’ny 110 m i Ali Kame | NewsMada
Lalao Olympika (JO 2016) : tsy nandray fiaingana teo amin’ny 110 m i Ali Kame
Par Taratra sur 17/08/2016
Tsy nisy niangana mihitsy ireo atleta malagasy niatrika ny Lalao olympika (JO 2016). Resy teo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona avokoa mantsy izy rehetra. Tsy afaka niatrika ny fifaninanana akory aza i Ali Kame.
Tsy manana solontena mifaninana any amin’ny Lalao olympika intsony i Madagasikara. I Ali Kame, niatrika izany farany, teo amin’ny 110 m misy fefy. Tsy nandray fiaingana akory ny tovolahy teo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona. Raha tsiahivina, tao amin’ny “série 6”, no nisy an’i Ali Kame. Ankoatra azy, anisan’ireo tsy nandray ny fiaingana ihany koa ilay Laosianina, Anousone. “Disqualifié” kosa ilay Kiobanina, i Portilla. Marihina fa nahazo ny laharana voalohany, tamin’ity fifanintsanana isan-tsokajy ity, ilay Zamaikanina, i Dan Carter, izay nahatontosa izany tao anatin’ny 13 s 51.
Tapitra resy am-boalohany avokoa izany ireo atleta nifaninana tany Brezila. Voahaja ny lojika, raha ny vokatra azon’i Madagasikara no lazaina satria tsy misy fahagagana mihitsy amin’ny fanatanjahantena.
Efa an-taony maro ny fanomanana, ho an’ireo firenena, manana mpifaninana misongadina sy mahazo vokatra tsara, amin’ny fihaonana avo lenta toy izao.
Tokony homena ny toerana sahaza azy amin’izay ny mpanao fanatanjahantena eto Madagasikara manomboka izao. Toy izany koa ny mpanazatra, satria tena ilain’ny atleta ny fisian’izany, amin’ny lalao toy izao.
Ahena ny isan’ireo filohana federasiona mitsangantsangana fotsiny. Raha tsiahivina, betsaka noho ny isan’ny atleta ireo mpitantana tao anatin’ny delegasiona malagasy, tamin’ity Lalao olympika 2016, ity.
Nisy mihitsy aza moa ny nisandoka ho mpanao gazety ka ny karatra fahazoan-dalana ho an’ny mpampahalala vaovao no nalainy.